Omeo ministera ny fiarovana ny mpanjifa - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Omeo ministera ny fiarovana ny mpanjifa
Ravaozanany Béatrice il y a 6 années
Fotoana fanaovana tatitra ny fotoana fifampiarahabana amin’izao fiandohan’ny taona vaovao izao. Nandroso ny asa vita ny birao foiben’ny RNDC ary nanoritsoritra ireo asa miandry ho an’ny taona 2014. Famintinana.
Nifamory nifampiarahaba noho ny fahatongavan’ny Asaramanitra ireo mpikambana ao amin’ny birao foiben’ny RNDC na Réseau National pour la Défense de Consommateurs. Notontosaina ny asabotsy 18 zanvie lasa teo izany fotoana izany.
“Ny RNDC na azo adika hoe tambazotra nasionaly ho fiarovana ny mpanjifa dia rafitra iray tsy miankina na amin’ny fanjakana na amin’ny tontolo politika” hoy Lita Rabetsara, izay filoha amperinasa ankehitriny. Rafitra hitambaran’ny fikambanana maromaro sy ireo olona tsara sitra-po izy ity araka ny fanazavana azo. Mikendry ny hiara ny mpanjifa amin’ny lafiny rehetra na manoloana ny fanjakana na eo anatrehan’ireo mpamokatra sy mpamongady ary mpaninjara. Tsy mifidy toerana hiasana ana antanan-dehibe na ambanivohitra.
Ny fotoana fifampiarahabana dia nahafahana nanao jeritodika ny zava-bita tamin’iny taona 2013 lasa iny ary nanoritsoritra ny miandry amin’izao taona 2014 izao.
Be ny ady
Raha henoina ny tatitra nataon’ny filohan’ny tambazotra RNDC dia maro ireo asa notontosaina tamin’iny taona 2013 iny. Midika izany fa be ny tsindry mahazo sy vesatra eo amin’ny mpanjifa.
Isan’ny tena nandrenesana ny RNDC dia teo amin’ny resaka fiarovana ny mpanjifa manoloana an’ireo misoloky. Ny tena nalaza tamin’izany dia ny JK Group. Orinasa iray niantso ny mpanjifa handrotsaka vola ampahan’ny vidina ordinatera ka ny sisa vidin’entana rehefa tonga ny entana. Ny entana anefa tsy tonga na tonga ihany fa tsy ilay ordinatera nifanarahana no notadiavin’ny orinasa hamidy amin’ny mpanjifa. “Azo lazaina fa nahomby ny asanay satria dia misy ireo olona tafaverina ny volany. Nandrisika azy ireo hiditra ato anatin’ny RNDC izany vokatra izany” hoy ny filohan’ny fikambanana. Raha ny fantatra dia mbola maro ireo sady tsy nahazo ny solosaina no tsy tafaverina ny volany. Mbola mila ezaka goavana izany ny fiarovana ny mpanjifa manoloana ny asan’ireo mpisoloky izay zary lasa miliaridera vetivety ary jeren’ny fanjakana fotsiny izany.
Maro ireo asa voatanisan’ny filohan’ny RNDC. Tamin’iny taona nivalona iny no nankalaza voalohany ny 15 marsa ny teto Madagasikara. Ny 15 marsa no andro iraisam-pirenena ho fiarovana ny mpanjifa. Dingana lehibe izany fanamarihana izany satria mitory fa misy ireo mpiaro ary mahatsapa ny fanjakana fa misy lesoka tokoa ao.
Tsy mihonona amin’ny fiarovana fe fiarovana manoloana ny tery ataon’ireo mpamokatra fotsiny ny fikambanana araka ny fanazavana. Mirotsaka mitady ny fampitomboana ny tolotra izy ireo. Arakaraka ny fahamaroan’ny tolotra no mampihena ny vidiny entana aty amin’ny mpanjifa. Isan’ny tsapan’izy ireo fa lavo ny sanda takian’ny JIRAMA ka mahatonga ny RNDC hitady vahaolana eo amin’ny angovo azo havaozina. “Efa miroso amin’ny famokarana angovo izahay izao” hoy ny filohan’ny RNDC. Nambarany fa any Marotandrano (Mandritsara) no iasan’izy ireo ka nananganana central hydro-électrique iray. Notsiahivin’ny filohan’ny RNDC fa noho ny ezaka nataon’izy ireo no nahazoana ny sokajim-bidy (mode tarifaire) 130 kWh eny amin’ny JIRAMA.
Mitady vahaolana ho an’ireo mpiasam-panjakana ihany koa amin’ny fametrahana karazana mutuelle ho azy ireo ny tambazotra. Nanomboka tamin’iny taona iny y fifampidinihana amin’ireo voakasika (mpiasam-panjakana sy ny banky ary ny ministeran’ny Vola).
Ho an’ny filohan’ny fikambanana dia tohizina ny asa natao tamin’ny taona 2013 iny. Isan’izany ny fanaovana fifaninana “Safidin’ny mpanjifa” izay nahiana vokatra tsara raha ny natao tamin’ny taona 2014. Ny faniriana dia ny hahatafavoahana Certification locale aloha ary miakatra hatrany ny lentan’izany avy eo.
Tohizina koa ny ezaka eo amin’ny fanentanana an’ireo mpivarotra hani-masaka sy ireo mpivarotra sakafo lany daty. “Misy lalàna miandry an’ireo depiote vaovao eto satria lalàna efa tany amin’ny taona 1959 no miasa ka kely loatra ny sazy indraindray 5 000 Ar no sazy ka inona moa izay 5 000 Ar ho azy ireo ?” hoy Lita. “Efa manana rijan-teny momba io lalàna izahay fa hiezaka handresy lahatra izay depiote vonona hiaro izany” hoy izy.
Isan’ny ezaka tsy maintsy efaina koa ny fanamarinana ireo fandanjana entana. Matetika dia ambaran’ireo mpampiasa ireny mpiasa antrano na mpanampy ireny fa izy ireo no mangala-danja kanefa dia eny amin’ny mpivarotra mihitsy no tsy ampy lanja ny entana.
“Mahafaly anay ny mandre ny filoha vaovao fa hijery ny vahoaka amin’ny filoham-pirenena vaovao. Manoloana izany dia maro ny hafatra tianay hampitaina aminy” hoy ny RNDC. Ny hafatra goavana diany fitakiana fametrahana minisitera manokana hiarovana ny mpanjifa. “Tsy maintsy hatsangana ny Ministère de la Consommation et du ravitaillement” araka ny fahitan’ny RNDC azy. Direction izy io ankehitriny ary manoloana izany dia matetika ny tombontsoan’ny mpamokatra (marge…) sy fanjakana (hetra…) no voadinika alohan’ny tombontsoan’ny mpanjifa araka ny fanazavana fanampiny. Hisy mihaino ve izy ireo ?